Isaky ny 5 taona no hatao ity fivoriam-be ity ary hanasana ny solontena rehetra ny fiangonana. Manodidina ny 300 mahery no handrasana hanatrika ity Synoda ity ary efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra. Ny lohahevitra noraisina amin’ity fivoriam-be ity dia ny hoe “ Fiangonana mitombo sy maneho ny finoany eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina”. Amin’izao fanomanana izao moa dia nanentana ny Kristianina Anglikanina rehetra ireo solontenan’ny Diosezy tetsy Faravohitra hitondra am-bavaka ity Synoda ity ary hanampy ara-pitaovana sy ara-bola arak’izay fahafahana. Hisy ny fanapahan-kevitra horaisina hitarihana ny fiangonana mandritra ny 5 taona indray amin’io fotoana io ary hiompana amin’ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny fitoriana ny filazantsara hatrany izany.